Thenga abaSebenzi abaSebenzayo kwi-Instagram kunye namaqhinga okubafumana Follow ers️ Abalandeli ▷ ➡️
Thenga abalandeli abasebenzayo kwi-Instagram kunye namaqhinga okubafumana
Disemba 12, 2018 0 IiCententarios 1069
Iinethiwekhi zentlalo zisekwe kakhulu kuluntu kwaye ziyinxalenye yobomi bemihla ngemihla yabantu abaninzi. Ukusetyenziswa kwayo kusasazeka ngesantya esiphezulu kwaye baninzi abasebenzisi abachitha iiyure neeyure kubo. Kungenxa yoko le nto abaninzi bakhetha ukuthenga abalandeli Iimpahla ze-Instagram kunye nokuphucula ubukho bakho ekuhlaleni.
Olunye uthungelwano olukhula ngokukhawuleza Instagram. Kwaye le network yoluntu yenye yezona zisetyenziswayo kwaye isekwe ekusetyenzisweni kwayo ikakhulu ekwabelaneni ngeefoto kunye nevidiyo inokugcinwa kwakhona ngeefilitha okanye izakhelo. Unokushicilela ividiyo ene-ephemeral kunye nemifanekiso ngokusebenzisa Instagram Stories, enokubonwa kuphela kwiiprofayili zeyure ze-24 kwaye emva koko inyamalale.
Ke, i-Instagram yinethiwekhi yoluntu apho iinkampani zinokufumana ukusebenza okuninzi. Ngapha koko, enye yeenjongo eziya kufezekiswa kukuba inani abalandeli khula Ingaba Thenga abalandeli abasebenzayo kwi-Instagram Usebenzisa usetyenziso olwahlukileyo kunye newebhusayithi, ethi, ngexabiso eliphakame kakhulu, yonyuse inani kunye nenani lokuthandwayo.
Unokuba nomdla Thenga abalandeli be-Instagram eArgentina.
Ungalandela amanye amaqhinga okuba nabalandeli abaninzi. Kuyo nayiphi na inethiwekhi yezona ndawo zibalulekileyo qulatho Ziyapapashwa. Oku kufuneka kube umgangatho kunye noqobo. Ngale ndlela kuphela unokuma ngaphandle kwaye ufumane ingqalelo yabasebenzisi. Ke, eyona nto ilungileyo yile imifanekiso kunye neevidiyo zezazo, kunye nokukhanya okuhle kunye neefilitha nazo zingongezwa ukuzenza zibe nomtsalane ngakumbi.
Ngapha koko, ngaphandle kokuba nezipapasho ezilungileyo kufuneka ujonge abantu ukuze ubabone kwaye kule unokwenza izinto ezininzi: sebenzisa ii-hashtag zokuhlela imifanekiso kwaye ukuba abasebenzisi bazifumana ngomxholo, njengemifanekiso yezinye iiakhawunti kwaye uphawule kwizithuba zazo kwaye ulandele abaphulaphuli ekujolise kubo (ujonga abantu abasebenzisa i-hashtag enxulumene nomxholo wenkampani okanye ukulandela abalandeli bamanye amazwe .ikhuphiswano lophawu). Ngokudibeneyo nezi zenzo, abasebenzisi abatsha banakho ukutsala umdla ukuba bangqina ukuba iakhawunti inefuthe elihle. Ukwenza oku kunokuba luncedo kakhulu ukuthenga abalandeli abasebenzayo kwi-instagram.
Ukuqwalaselwa kwabasebenzisi abakhona kwi-Instagram kunokufezekiswa ngento elula kakhulu. Ngokulula ukongeza indawo apho isithuba sabiwe khona ingqalelo yakho yanda kakhulu.
Ukongeza kwi Thenga abalandeli kwi-instagramEnye indlela yokutsala abasebenzisi kwiakhawunti yeNkampani kukusebenzisa iintengiso kwi-Instagram. Ngale ndlela, Amaziko anokucacisa abaphulaphuli bawo kwaye afumane ingqalelo yabo ngokusebenzisa i-30 imizuzwana yevidiyo. Banokubandakanya amaqhosha amema intshukumo enje ngokuthi "Funda ngakumbi" okanye "Thenga ngoku."
Amabali e-Instagram sisixhobo esiluncedo kakhulu ekuboneleleni ngexabiso kwi-akhawunti ye-Instagram yequmrhu kunye yandisa kwaye wakhe ukuthembeka. Apha ungapapasha iindaba zamva nje, iindaba, imicimbi ebanjiweyo, iirisk, ukhuphiswano, uphando okanye wabelane ngamabali abasebenzisi abathetha igama lenkampani. Nditsho ndenze iividiyo bukhoma ukuze abalandeli babuze imibuzo. Unako kwakhona Thenga abalandeli be-Instagram eBolivia.
1 Umxholo okwinqanaba
2 Ukutsala abasebenzisi
3 Yongeza indawo
4 Iintengiso ze-Instagram
Thenga abalandeli ku-Instagram ngexabiso eliphantsi
Funda ukuthenga ukuthandwa kwi-Instagram